Ukwakhiwa Mesh Panel - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
Ukwakhiwa Mesh Panel ifakiwe kwakhiwa wire eziphothene anezikhala ocingweni iphaneli / ashiselwe anezikhala iphaneli / ashiselwe anezikhala uthango / ashiselwe anezikhala ocingweni / tephaneli ashiselwe kocingo 1. ashiselwe anezikhala ocingweni iphaneli is by Welding ongaphakeme-carbon steel wire noma engagqwali wire. Kuhlanganisa galvanization ashisayo-bacwilisa, electro galvanization, PVC-camera, okungenxa yezimo ezikhethekile eziphothene Wire Mesh. Ashiselwe anezikhala iphaneli ikhono kuyinto antisepsis okusezingeni eliphezulu futhi oxidation- ukumelana. Kungashiwo kabanzi njengoba ukwakhiwa, uthango, umhlobiso kanye nemishini ukuvikela e e ...
Ukwakhiwa Mesh Panel ifakiwe wire eziphothene anezikhala ocingweni iphaneli / ashiselwe anezikhala iphaneli / ashiselwe anezikhala uthango / ashiselwe anezikhala ocingweni / tephaneli ashiselwe kocingo
kwakhiwa 1. ashiselwe anezikhala ocingweni iphaneli is by Welding ongaphakeme-carbon steel wire noma engagqwali wire. Kuhlanganisa galvanization ashisayo-bacwilisa, electro galvanization, PVC-camera, okungenxa yezimo ezikhethekile eziphothene Wire Mesh. Ashiselwe anezikhala iphaneli ikhono kuyinto antisepsis okusezingeni eliphezulu futhi oxidation- ukumelana. Kungashiwo kabanzi njengoba ukwakhiwa, uthango, umhlobiso kanye nemishini ukuvikela e izimboni, ezolimo, i-traffic futhi zokuthutha, izimayini, inkantolo, utshani kanye kulinywe, njll.
Ashiselwe Mesh kocingo Panel wenziwe eliphakeme quality ashiselwe anezikhala, nge flat ngisho ebusweni, isakhiwo niqinile, isetshenziswe kabanzi isakhiwa ukudla, ezolimo njalonjalo.
2. anezikhala ashiselwe kocingo iphaneli sebhithi
Wire ubukhulu: 0.15mm-12mm
usayizi Mesh: 1/2 "-6" (1/2 "x1 / 2", 1 "x1", 2 "x2", 3 "X3", 4 "x4", 5 "x5", 6 "X6", 1 "x2", 2 "X3", 2 "x4" njll)
ububanzi nobude eyayingenziwa njengoba ngamunye isicelo sakho!
Ukupakisha: banqunu noma ku Pallet
3. ashiselwe Mesh uhlobo Fence Panel impahla kanye esikhiqiza inqubo
Material: Electro lashukumisa ashiselwe anezikhala iphaneli
cwilisa Zezıhlabane lashukumisa ashiselwe anezikhala iphaneli
Black carbon ongaphakeme ashiselwe anezikhala iphaneli
PVC camera eziphothene anezikhala panel
Insimbi steel ashiselwe anezikhala iphaneli
Wire Ububanzi (mm)
Previous: Ukugxilisa Mesh Panel
Olandelayo: Staninless Steel ashiselwe Wire Mesh
50mmx 50mm ashiselwe Panel
Aviary Mesh Iphaneli
Black ashiselwe Mesh Panel
Camera Wire Mesh Panel
Ukhonkolo Wire Mesh Iphaneli
Double Wire ashiselwe Panel
Iron ashiselwe Panel
Plastic Camera Wire Mesh Panel
Powder Camera Wire Mesh Iphaneli
PVC Camera ashiselwe Wire Mesh Panel
PVC Camera ashiselwe Wire Mesh Iphaneli
PVC ashiselwe Wire Mesh Panel
PVC ashiselwe Wire Mesh Iphaneli
Super Quality Wire Mesh Iphaneli
Uncoated ashiselwe Mesh Panel
Ashiselwe Mesh Panel
Ashiselwe Mesh Iphaneli
ashiselwe ashiselwe Mesh Iphaneli
Ashiselwe Wire Garden Iphaneli
Ashiselwe Wire Panel 4x4
Wire Mesh Iphaneli
Wire ashiselwe Izinkomo Iphaneli
Electro Wire lashukumisa